कोरोना जितेर घर फर्किँदै बागलुङकी ६५ वर्षीया महिला:: Mero Desh
कोरोना जितेर घर फर्किँदै बागलुङकी ६५ वर्षीया महिला
Published on: ६ बैशाख २०७७, शनिबार १२:१९
बागलुङ : जिल्लाको दोस्रो तथा नेपालको छैठौँ कोरोना संक्रमित बागलुङ नगरपालिका–३ गौडाकोटकी ६५ वर्षीया महिलाले कोरोनालाई जितेकी छिन् । उनलाई पोखरामा पछिल्लो दुई पटक गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि भएको धौलागिरी अञ्चल
अस्पताल बागलुङका प्रमुख डा.शैलेन्दै बि पोखरेलले जानकारी दिए । ती महिलाको पहिलो र दोस्रो स्वाब पोजिटिभ आए पनि तेस्रो र चौथो स्वाब भने नेगेटिभ आएको छ । चैत ४ गते बेल्जियमबाट कतार हुँदै बागलुङ आएकी महिलालाई चैत १७ गते कोरोना संक्रमण भएको पुष्टी भएको थियो ।
कोरोना संक्रमण भएको पुष्टी भएपछि धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङको आइशोलेशन वार्डमा उपचाररत महिलालाई अब अस्पतालले डिस्चार्ज गर्ने तयारी गरेको छ। दम र प्रेसरको समस्या भए पनि ६५ वर्षीया महिलाले उच्च मनोबलका कारण कोरोनालाई सजिलै जितेर घर फर्कन लागेको डा.पोखरेलले बताए ।
अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिए पनि ती महिलालाई केही समय घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरिने अस्पतालले जनाएको छ ।
नेपालको पाचौँ संक्रमित तथा बागलुङकी पहिलो संक्रमित १९ वर्षीया युवतीको भने चौथो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ आएको छ ।
पोखरामा फेरी देखियो यस्तो घा,तक पुतली, उ,पचारमा ढिलाई भए आँखाको ज्योति गु,म्ने
सपना रोका मगर अस्वस्थ-भयपछि हस्पि,टल मा-भर्ना भ,ईन, पछिल्लो उनको स्वा,स्थ्य -अवस्था यस्तो।
“मोटी भन्दा पा’तली किन मन पराँउछन? कार’ण यस्तो छ। पढ्नुस्!
एमाले अध्यक्ष ओलि अस्वस्थ्य, अत्यबाश्यक काम बाहेक भेटघाट बन्द
अण्डा उसिनेकाे पानी खेर नफाल्नु। यस्तो छ फाईदा ! पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं
चरी मात्रै कहाँ जे`लैमा हाे र म पनि जेलै”मा भन्दै बि`रामी परेका च`र्चित दोहोरी गायक रबिन ला’मिछानेको भा’वुक स्टाटस,